Alatsinainy 28A (Lioka 11:29-32) - 12/10/2020 | FKMP
Alatsinainy 28A (Lioka 11:29-32) – 12/10/2020
« Tamin’izany andro izany, nitangorona betsaka ny vahoaka, dia nilazan’i Jesoa hoe: “Taranaka ratsy itý taranaka itý; mitady famantarana izy, nefa tsy homena afa-tsy ny famantaran’i Jônasa mpaminany. Fa tahaka ny naha-famantarana an’i Jônasa tamin’ny olona tany Niniva no haha-famantarana ny Zanak’Olona koa amin’itý taranaka itý. Hiara-mitsangana amin’ny olona amin’itý taranaka itý ny mpanjakavavy avy any Atsimo amin’ny andro fitsarana ka hanameloka azy, satria niala avy tany amin’ny fara vazan-tany izy hihaino ny fahendren’i Salômôna, nefa indro misy mihoatra noho i Salômôna eto. Hiara-mitsangana amin’itý taranaka itý ny olona tany Niniva amin’ny andro fitsarana ka hanameloka azy, satria nibebaka tamin’ny toritenin’i Jônasa izy ireny, nefa indro misy mihoatra noho i Jônasa eto.” »
Rehefa nirahin’Andriamanitra ho any Niniva I Jonasa hampibebaka ireo olona tao amin’ny tanana, dia nino sy natoky avy hatrany ireto farany fa famantarana avy amin’Andriamanitra ny fahatongavan’i Jônasa ka nampitodika azy ireo taminY. Eto i Jesoa dia milaza fa » taranaka ratsy » ireo vahoaka nihaino azy tamin’izany, noho ny tsy fahatokiany fa I Jesoa eo anivony no famantarana hita maso izay tsy iza fa zanak’Andriamanitra tonga hanavotra azy.
Tompo ô, ampio izahay mba tsy hiandry famantarana mivaingana vao hanompo sy hibebaka Aminao fa na dia ny masoandro mihiratra isa maraina aza dia efa famantarana lehibe ny fisianao. Mino sy matoky izahay fa Ianao hitoetra ao anatinay tahaka ny nataonao an’ireo vahoaka tao Niniva hibebahanay sy hitodihanay Aminao mandrakariva. Amen
Previous Post: Asabotsy 27A – (Lioka 11, 27-28) – 10/10/2020
Next Post: Talata 28A (Lioka 11, 37-41) – 13/10/2020